Ubuntu Vs Red Hat ပြိုင်ပွဲ - MYSTERY ZILLION
Ubuntu Vs Red Hat ပြိုင်ပွဲ
November 2009 edited November 2009 in Linux/Unix
MZ မှာတော့ MZ အသဲစွဲက Ubuntu ပေါ့ဗျာ ....
ကျနော်က Red Hat တော့သုံးဖူးတယ်။ Network Diploma တက်တုန်းကလဲ သင်ရတာပဲ။ ခုတော့ မသုံးဖြစ်တာကြာတော့ ခပ်မေ့မေ့ရယ်ပေါ့။
Ubuntu ကတော့ လုံး၀ကိုမသုံးဖူးသေးတာဗျ။
Red Hat သုံးနည်းစာအုပ်ကျနော့်မှာ မြန်မာလိုရှိတယ်။ MZ ကပဲရတာ .... ဘယ်သူ့ဆီကလဲတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ Ubuntu သုံးနည်းလေးတွေရှိရင်လဲ မျှပါဦးနော့ ....
ကျနော်သိချင်တာက Server ပိုင်းကို လေ့လာမယ် - လက်တွေ့သုံးတော့မယ်ဆိုရင် Ubuntu နဲ့ Red Hat ဘယ်ဟာကောင်းမလဲ မသိဘူး။ လက်တွေ့အပြင်မှာကော ဘယ်ဟာကိုပိုသုံးလဲမသိဘူး။ ကျနော် တွေ့နေရသလောက်တော့ Red Hat ကိုပိုပြီးတွေ့နေရသလိုပဲ ....
Linux Master အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ ပြောပေးကြပါဦး .... Ubuntu နဲ့ Red Hat ရဲ့ကွာခြားမှု့လေးတွေကို ............
( Fedora လေးပါသိရင် ပြောပေးကြပါဦးဗျာ ... )
I want to suggest you to include :
1) Debian Linux
2) Open SuSe
At the moment, I like CentOS personally.
We can't compare distro. Ubuntu design for End user. Fedora for Network and Redhat for enterprise :P So, how to compare it.
Distros တွေများရတာ လူ့အကြိုက် ကိုယ့်အကြိုက်မတူကြလို့ နောက်ပြီး ကိုယ့်အသုံးသူ့အသုံး မတူကြလို့ပါ။ ကိုယ်က ကြိုက်တိုင်း သူများကြိုက်ချင်မှ ကြိုက်မှာပါ။
ကျနောှ့စက် ကျနောှ့အသုံးနဲ့ Linux Distros တွေထဲမှာ ကျနောှ့အကြိုက်ဆုံးကတော့ Debian GNU/Linux ပါ၊ အရမ်းကိုလွယ်ကူပြီး speed အရလဲ တကယ့် rocky speed ပါပဲ။ ကျနောှ့ရဲ့ main distro လဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်တာတွေကတော့ စမ်းကြည့်တာလောက်ပါပဲ။ Ubuntu ဆိုရင် user တွေအတွက် Easy Install, Manage လုပ်နိုင်ပြီး User Interface နဲ့ Applications အသစ်အသစ်တွေပေါက်ဖွားရာနေရာ userland ဖြစ်ပြီး Fedora ကတော့ kernel new features တွေ နည်းပညာအသစ်တွေ ပောက်ဖွားလေ့ရှိတဲ့နေရာ userland ဖြစ်တယ်လို့ လက်ရှိပြောလို့ရပါတယ်။
CentOS ကတော့ Red Hat Enterprise ကို Free Distribute လုပ်တဲ့သဘောပါ။ Red Hat rpm အသုံးပြုချင်သူများအတွက်တော့ Fedora ဒါမှမဟုတ် CentOS ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
နောက်တမျိုးက Gentoo Linuxပါ။ Gentoo က Users တွေကို ဘာမှဖုံးကွယ်မထားပါဘူး။ Complete customizable Distro ဖြစ်တယ်။ Powerful Distro တစ်ခုလဲဖြစ်တယ်။
လောလောဆယ်တော့ Ubuntu ကိုပဲ သုံးနေပါတယ်.. သို့ပေမယ့် .NET ကိုလည်း လက်မလွှတ်နိုင်သေးတော့ Window7ထဲကနေပဲ တင်ထားရတာပါ
ကို box မမြင်တာကြာပေါ့။ Gentoo စမ်းဖြစ်ပြီလား ကို box ။
Distro တွေကိုတင်ယှဉ် ကြည့်ဖို့မလွယ်ဘူးဗျ။ ကျနော် laptop တစ်လုံးမှာ CentOS 5.3 နဲ့ Debian 5.0 ယှဉ်တင်ထားတယ်။ ဘယ်ဟာပိုကောင်းလည်း မေးရင်တော့ ပိုကြိုက်တာ ပိုကောင်းတာပေါ့။ RPM vs DEB ဆိုရင်တော့ rpm ထက် deb က community အားသာတယ်။ apt-get က package manager ထဲမှာ အကောင်းဆုံးလို့လည်းဆိုကြတယ်။ ဘာပဲပြောပြော ကျနော့ personal fav ကတော့ CentOS ပါ။ CentOS ကိုပဲ ပိုကျွမ်းကျင်လို့ CentOS ပဲပိုသုံးဖြစ်တယ်။ Debian နဲ့ CentOS ကိုတော့ သဘောကြတယ်။
DEB distro တွေကိုတော့ ရှာမရှေတော့ဘူး။ RPM distro မှာတော့ Redhat က server version အတွက် အကောင်းဆုံးပေါ့။ Free သုံးချင်တယ်၊ Update တွေ patch တွေ ထွက်တာ နည်းနည်းနောက်ကျတာ ပြသနာမဟုတ်ဖူးဆိုရင် CentOS နဲ့ Scientific linux က ကောင်းတယ်။ Fedora ကတော့ Redhat Enterprise Linux ရဲ့ Beta / testing version တွေလိုဖြစ်ဖြစ်နေတော့ individual user အတွက်ပဲ ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ နောက်တစ်မျိုးက Novel ရဲ့ SuSE ။ သူလည်း beta / testing အနေနဲ့ OpenSuSE ထွက်ပါတယ်။ ကျနော်ပဲ ကံမကောင်းသလားမသိ နှစ်ခါလုံး buggy ဖြစ်တယ်။ Community က တော်တော်အားနည်းတယ်ဗျာ။ သူ့ရဲ့ YaST က yum ကိုရော apt-get ကိုပါ မမှီဘူးလို့ ထင်တယ်။
Gentoo သမားကတော့ ကျန်တာတွေစိတ်ဝင်စားမယ်တောင် မထင်ဘူး။ Gentoo ကောင်းကောင်းသုံးတက်ရင် Linux system တစ်ခုအလုပ်လုပ်ပုံကို နားလည်ပြီ။ Linux From Scratch (LFS) လည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ Apache run ရုံပဲဆိုရင် အားလုံးပေါင်း 8MB free disk space က လုံလောက်တယ်တဲ့။ Gentoo ရော LFS ရော စမ်းဖို့ကြိုးစားနေတာကြာပြီ။ အပျင်းရောဂါပျောက်ရင်တော့ စမ်းဖြစ်မှာပါ။ :67: :67:
လူစုံပြီဆိုတော့ ဝိုင်းစမယ် အဲလေ စိတ်ဝင်စားလို့ ဝင်ပြီးအာလူးဖုတ်ဦးမယ် Distro ဆိုတာက Software လေးတွေစုံစီနဖာ စုပေးထားတဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ Install လုပ်လို့ရတဲ့ Linux တွေလို့ ပြောလို့ရမယ်မဟုတ်လားခင်ဗျ။ စုစည်းပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်း ကုမ္ပဏီအပေါ် မူတည်ပြီးနာမည်ကွဲနေတာလို့ ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်။ သက်ဆိုင်ရာ Distro အလိုက် Version ပြောင်းတယ်ဆိုတာက စုစည်းထားတဲ့ Software တွေ Kernal တွေ Version ပြောင်းသွားရင် ဟောင်းသွားလို့ Distro သမားက Version အသစ်တွေ ထပ်စုပေးတာပဲလေ။ ဥပမာ- Ubuntu 9.04 ကနေ Ubuntu 9.10 ဖြစ်သွားတာ ဘာကွာသလဲဆိုရင် သေချာတာကတော့ 9.10 မှာ 9.04 မှာပါတဲ့ Application တွေရဲ့ Version အသစ်တွေ ဖြစ်နေတာပဲ ကွာမှာပါ ဒီတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် Upgrade လုပ်တတ်ရင် သူ့တို့အသစ်ထုတ်တာကို မသုံးလည်းဖြစ်တာပဲလေ။ ကိုယ်သက်ဆိုင်ရာ သုံးနေတဲ့ Application ကိုပဲ ကိုယ်တင် Upgrade လုပ်လို့ရတာပဲမဟုတ်လား။ ဒီတော့ Distro ဆိုတာက ယှဉ်ကြည့်စရာမှမလိုတာ ပြောမယ်ဆိုရင် သူတို့က ကိုယ်တိုင်လုပ်တာထက် သူများလုပ်ထားတာတွေ စနစ်တကျ စုပေးတဲ့လူသက်သက်ပါပဲ။ ကိုသေတ္တာနဲ့ ကိုဒီဗင်နတီ ပြောသလိုပဲ Distro တစ်ခုစီမှာ ဦးစားပေးတဲ့အပိုင်းတွေရှိတော့ သူတို့ဦးစားပေးတဲ့ အပိုင်းတွေမှာသုံးတဲ့ လူတွေက တစ်ယောက်အကြိုက်တစ်မျိုးတွေ ဖြစ်နေတာပေါ့။
Distro လုပ်တဲ့လူတွေ လွယ်လွယ်ကူကူ သူများဆီက စုဆောင်းတယ်လို့ မပြောဘူးနော် အင်မတန်လက်ဝင်ပါတယ် Optimize လုပ်ပေးရတယ် Upgrade လုပ်လို့လွယ်အောင် လုပ်ပေးရပါတယ်။ Distro သမားတွေ ကိုယ်တိုင်ဘယ်လို လုပ်ရတယ်ဆိုတာကို သိချင်ရင် စိတ်ဝင်စားတဲ့လူများ စမ်းကြည့်ကြပါဦးလား။ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတယ်လို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ Pocket Linux လေးလုပ်ကြည့်ကြပါလား။ အဲဒီ့ Project ကကြာပါပြီ Floppy လေးနှစ်ချပ်နဲ့ Linux လေးလုပ်ကြည့်တာပါ အားလုံးကိုယ်တိုင်ပဲ Compile လုပ်ယူရပါတယ် Programming တတ်စရာမလိုပါဘူး။ အခုခေတ်တော့ Floppy မရှိတော့ပါဘူးလေ USB နဲ့အစားထိုးလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒါလုပ်လို့ ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ Linux တစ်ခုဘယ်လို တည်ဆောက်ထားတယ် ဆိုတာသိလာမယ် ဘယ်လိုအစိတ်အပိုင်းတွေပါတယ် ဆိုတာသိလာမယ် Kernal တစ်ခုတည်း ဘာမှလုပ်မရဘူးဆိုတာရယ် အပေါ်ကနေ Shell ရှိမှသာ Kernal နဲ့ပြင်ပနဲ့ ဘယ်လိုဆက်သွယ်တယ်ဆိုတာတွေ အဆင့်အလိုက် သေသေချာချာသိသွားမယ်။ Command တွေနဲ့ ရင်းနီးသွားမယ် Source Code ကနေ Compile လုပ်ပြီး Linux System တစ်ခုဆောက်တတ်သွားမယ်။
ထွက်လာတဲ့ Linux ကတော့ Ubuntu တို့ဘာတို့လိုတော့ မမျှော်လင့်နဲ့နော် ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုလုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ လမ်းတော့သိသွားတာပေါ့ဗျာ။ ပိုပြီးလုပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Linux From Scratch ကိုစမ်းလုပ်ကြည့်ပေါ့ သူကတော့ နည်းနည်းများပါတယ် စာအုပ်လည်း ခေတ်မှီပါသေးတယ်။ အခုခေတ်မှာ စမ်းရတာလွယ်ပါတယ် ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တုံးကဆိုရင် အင်တာနက်သုံးလို့ရတဲ့ နေရာကတော်တော်ရှားပါတယ် Download လုပ်ရမယ့် Source Code Links တွေကိုကူးပြီးတော့ သုံးလို့ရမယ့်နေရာမှာသွားဒေါင်း ဗမာပြည်ကွန်နက်ရှင်က အခုခေတ်မှ မဟုတ်ပါဘူးလေ အရင်ကလည်း ထူးမခြားနားပါပဲ Kernal လို Source Code ကြီးတဲ့ဟာတွေဆို တော်တော်သည်းခံရတယ်။ အိမ်ရောက်မှ အဆင့်ဆင့် လုပ်ကြည့်ရပါတယ် တစ်ဖိုင်လောက် ဒေါင်းဖို့ကျန်ခဲ့ရင်သွားပြီ နောက်ရက်မှထပ်ပြီးဒေါင်း။ မေးစရာလူလည်းမရှိဘူးလေ စာဖတ်ပြီးစမ်းလုပ်တာပေါ့ လည်ချာလည်ချာနဲ့ တစ်ပါတ်ဆယ်ရက်လောက်ကြာမှပြီးပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေ ဆိုရင်တော့စမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ် အနည်းဆုံးတော့ OS စာအုပ်ထဲက စာတွေနားမလည်ပေမယ့် အစိတ်အပိုင်းတွေလောက်တော့ နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်လည်း တတိယနှစ်ကျောင်းသား ဘဝက OS စာအုပ်ထဲက Lab တွေကိုစမ်းကြည့်ချင်တာပါ Concurrency Lab လိုဟာတွေက BSD ပေါ်မှာမှ Run လို့ရတာပါ BSD မရှိလို့ Linux ပေါ်မှာ လျောက်စမ်းရင်း လုပ်ကြည့်မိခဲ့တာတွေပါ။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်က ကျောင်းသားများလည်း ဒီအပေါ်မှာများပါတယ် စိတ်ဝင်စားရင် လုပ်ကြည့်ကြပါဦးလား အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။ ဟာဗျာ ကျွန်တော်တို့ကို အဲဒီလိုမသင်ဘူးလို့ မပြောပါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း မသင်ခဲ့ရပါဘူး လုပ်ချင်စိတ်ရှိရင်တော့ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်
ကျွန်တော်လည်း Ubuntu ကို ပြန်ပြင်ပြီး distro အဖြစ်ကြိုးစားဘူးတယ်။ ဒါပေမယ့် မလွယ်ဘူးဗျ။ လူက ဒီမှာဖြင့် ပြင်လို့မပြီးသေးဘူး ထွက်ပြန်ပြီဟ အသစ်နောက်တစ်ခု။ ကိုယ့် server မှာ deb package အသစ်တင်ရုံရှိသေးတယ်။ နောက်ထပ် အသစ်က ထပ်ထွက်ပြန်ပြီ။ ထပ်ထွက်တဲ့ package တွေကလည်း မနည်းဘူးဆိုတော့ သေချာတယ် တစ်ယောက်တည်းလုပ်လို့မရဘူးဆိုတာနဲ့ မလုပ်တော့တာ။
Ubuntu က distro ပြန်လုပ်ဖို့အလွယ်ဆုံးပဲ။ သူက တော်တော်လေးကို ပြန်ပြင်ရတာ လွယ်တယ် (လုပ်တတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့)။ Ubuntu ဆိုတဲ့ စာတစ်လုံးမှ မပါအောင်တော့ ဖျောက်လို့မရဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ kernel ကို compile လုပ်ထားတာ ubuntu ကဖြစ်နေလို့ပါ။ kernel ကို compile လုပ်။ package တွေဖြည့်ဆိုရင် ရန်ကုန်မှာကတော့ လုံးလုံးကို မလွယ်တာဗျ။
Distro တစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုတာကလည်း လူအင်အားလိုသေးတယ်။ compile တွေလုပ်ရတာလည်းမနည်းဘူး။ နောက်ပြီး package လုပ်ရတာလည်း အဲလောက်ထိ အလွယ်ကြီးမဟုတ်ဘူး။ Linux မှာ Distro တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး ကိုယ်ပိုင် package တစ်ခုရှိရပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် package မရှိပဲနဲ့တော့ Ubuntu က re-distro လုပ်တာကို သဘောမတူဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် package လုပ်ပြီိဆိုတာကလည်း အလွယ်ကြီးတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ဒါကတော ့လုပ်ဖူးတဲ့လူတွေ သိမှာပါ။ အများအားဖြင့်တော့ Distro တွေက application menu design လောက်ပဲ ပြင်ပြီး redistro လုပ်ကြတာများပါတယ်။ အဲဒါက ပြင်ရတာ အလွယ်ဆုံးကို
အခုတော့ Ubuntu ပဲ သုံးနေတယ်ဗျာ။ တခြားဟာတွေကတော့ မသုံးတတ်လို့ မသုံးဖြစ်တော့ဘူး :P
ကို Alexander ရေ ...
အဆင်ပြေမယ် ဆိုရင်တော့ Red Hat စာအုပ်လေးကို ပြန်မျှပေးပါလား
kzthet wrote: »
ကျနော် MZ ကပဲရတာပါ ... လင့်မမှတ်မိတော့လို့။
ဒီမှာတော့ အချိန်သိပ်မရလို့ ... ရန်ကုန်ရောက်ရင် . ( မနက်ဖြန် ) ပြန်တင်ပေးပါမယ် Bro ...
ကျနော်က ကျနော့်ရဲ့ အလုပ် ( Professional Use ) Enterprise အတွက်သုံးချင်တာလေ။
Red Hat ကို အခြေခံရှိခဲ့တော့ .... ပြီးတော့ Bro တွေပြောတဲ့အတိုင်းဆို ... Enterprise Level အတွက်က Red Hat ကအသင့်တော်ဆုံးလို့ပဲယူဆပါတယ် ( ကျနော့်အတွက် )
Red Hat ကိုပဲကောင်းကောင်းဆက်လေ့လာလိုက်မယ်။
လမ်းတွေများပြီး ယောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေမှာဆိုးလို့ .... ဆရာသမားတွေကို လမ်းပြခိုင်းရတာ ....
I think Ubuntu is easy for desktop users....And free of charge.
Red Hat is commercial version and it's use for Enterprise and Corporate Servers.
It's not easy like Ubuntu........ Ubuntu is just good for Desktop Pcs.
Fedora is Free Version of Red Hat.
Ubuntu is Free Version of Debian.
And there are many flavor of Linux and you can choose your fit.
Red Hat က မြန်မာနိုင်ငံမှာမို့ ဿFree ရသလောက်ဖြစ်နေတာပာ နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်တော့ Commercial ဖြစ်တဲ့အတွက် ဝယ်သုံးရပာတယ်.. အဲဒီအတွက်ကြောင့် Free Version ဖြစ်တဲ့ Fedora ( fedoraproject.org ) ကို ထုတ်ထားပာတယ်
Commercial တွေနဲ့ Free တွေနဲ့ ကွာတာတော့ သိပ်ပြီး ပြောဖို့လိုမယ်မထင်ပာဘူး
Commercial တွေဟာ တစ်ခုခု Error တွေ Bug တွေ ဖြစ်လာရင် ထုတ်လုပ်တဲ့ Vendor တွေအနေနဲ့ Solution ကို ခောင်းခံပြီးတော့ ပေးနိုင်ပာတယ်.. တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ခောင်းခံနိုင်တယ်ပော့.. Support လည်း အပြည့်အဝပေးနိုင်ပာတယ် အဲဒီအတွက်ကြောင့် Microsoft ဆိုတာ အခုထိ ရပ်တည်နိုင်သေးတာပာ
Free များရောက်တော့ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ ရှင်း သို့မဟုတ်.. သူ့ Community က ကြီးရင်တော့ ပြသနာရှင်းဖို့ လွယ်ကူသွားမှာပာ.. နို့မဟုတ်ရင်တော့ လည်နေမယ်
Free တွေမှာလည်း Community များတဲ့ Support ပေးနိုင်တဲ့ Sponsor ကောင်းတဲ့ :P သူများဟာ ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်လာပာတယ်.. အဲဒီအတွက်ကြောင့်လည်း နာမည်ကြီးလာတဲ့ Product တွေ ထွက်ပောှလာပာတယ် ( e.g WordPress )
Just my curiosity bro. Could we buy RHEL in Myanmar with License ? I mean something from National CD shop . Redhat wont allow you use their repositories if you dont have valid license key installed ( called RHN subscription). Every further installation mush go through manual rpm method or use CentOS or SL repo. I want to know whether those license keys we can get from CD shops can overcome this restriction.
FYI, Fedora 12 Constantine is going be lunched on 17th of November, this month. :67:
brownbear wrote: »
Ubuntu is just good for Desktop Pcs.
Ubuntu မှာ Desktop အတွက်ရော Server အတွက်ပါရှိပါတယ်၊ Ubuntu ကို Enterprise တွေမှာလဲ သုံးကြပါတယ်။ နှစ်မျိုးစလုံးကိုသုံးကြတာပါ။ ကျနော်လုပ်နေတဲ့ ကုမဿပဏီမှာ Ubuntu Desktop ရော Server ရောသုံးတာတွေ့ရတယ်၊ တချို့ projects တွေမှာ meamo applications development အတွက် Ubuntu ကိုသုံးပါတယ်။ နောက်ပြီးတချို့ projects တွေမှာလဲ Ubuntu Server ထိုင်ပြီးပါတယ်။ အဲတော့ Ubuntu ကို Enterprise မှာ Desktop အတွက်ရော Server အတွက်ပါစိတ်ချလက်ချအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်၊ Support လုပ်ချင်ရင်လဲ Red Hat Enterprise လို၀ယ်လို့ရပါတယ်။
နောက်တစ်ခု Fedora ဟာ Red Hat Enterprise ရဲ့ free version မဟုတ်ပါဘူး၊ Fedora ဟာ Red Hat က sponsor လုပ်ပေမယ့် သူ့ development သူ သွားနေတာပါ၊ အဲဒီ Fedora ကနေမှ ကောင်းတဲ့ features တွေကို Red Hat ကိုယူသုံးတယ်လို့ယူဆနို်င်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက Debian က လုံး၀ Free and Freedom ပါ။ Universal OS လို့တောင် တင်စားခော်ဝော်ကြပါတယ်၊ Ubuntu က Debian ကိုအခြေခံပြီးထုတ်ပေမယ့် သူ့ development နဲ့သူပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်ဦးစလုံး bug tracking နဲ့ bug fixed မှာ တချို့နေရာတွေမှာ cooperate လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ Ubuntu က Enterprise အတွက်ရည်ရွယ်သလို Freedom လဲဖြစ်ပါတယ်၊
Debian ကတော့လုံးဝ Free ပါ Absolutely Free and Freedom distro လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Debian က Stable ဖြစ်မှုကိုပိုပြီး ဦးစားပေးတဲ့သဘောပိုရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Debian မှာသုံးတဲ့ packages တွေကိုကြည့်ရင် လုံးဝ stable ဖြစ်တဲ့ packages တွေကိုပဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်ကတော့ ubuntu ကို စသုံးတတ်တာဆိုတော့ Ubuntu နဲ့ သူ့မျိုးကွဲတွေ ကိုပဲ ကြိုက်ပါတယ်
OpenSuse, ဿFedora11, CromeOS, တွေကို စမ်းသပ်ခဲ့ပေမယ့် (ကိုယ်ကလဲ ခပ်ညံ့ညံ့ဆိုတော့) လေးငါးရက် ဆက်တိုက် သုံးတာတောင် ကောင်းကောင်း လုပ်တတ်မလာဘူး ဆိုတော့ လက်လျှော့လိုက်ရတာပေါ့---
အစပိုင်းကတော့ သူများတွေရဲ့ screen shot တွေကို ကြည့်ပြီး distro ပြောင်းသုံးချင်ခဲ့ပါတယ်-- နောက်တော့လဲ- Ubuntu Theme လေးတွေ ပြင်တတ်သွားတော့ အသစ် မစမ်းချင်တော့ဘူးလေ-- :P -- ပြင်းတာလဲပါတာပေါ့--
ubuntu ကို စသုံးရတာကလဲ xp ကို virus ကိုက်ခံရလို့လေ---
Red Hat သုံးနည်းစာအုပ်လေး တင်ပေးပါ
Here is t he Official Red-Hat Documentation. You can get everything you want from that.